यी निर्माताले राखेका थिए ‘पवित्र रिश्ता’ की नायिका अङ्कितालाई एक रात सुत्ने अफर, त्यसपछी जे भयो …. – Dailny NpNews
यी निर्माताले राखेका थिए ‘पवित्र रिश्ता’ की नायिका अङ्कितालाई एक रात सुत्ने अफर, त्यसपछी जे भयो ….
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ०६, २०७८ समय: २१:५५:५१
काठमाडौं । टिभी शो पवित्रा सिस्तामा सुशान्त सिंहसँग काम गरेर लोकप्रियता कमाएकी भारतीय सुन्दरी नायिका अङ्किता लोखन्डेले सुशान्तका लागि शाहरुख र सञ्जयको फिल्म छाडेको बताएकी छिन् ।
अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधन भएको अहिले ९ महिना पुगिसकेका बेला कुनै समय उनको प्रेममा परेकी अंकिताले आफूले सुशान्तका लागि बलिउका केही ठूला फिल्मको अफर छाडेको दाबी गरेकी छन् ।
यसको अलवा उनले करियरको सुरुवातको दिनको दुःखसमेत शेयर गरेकी छन् । हालैको एक अन्तरवार्ताका क्रममा उनले सुशान्तकै लागि भनेर शाहरुख खानको फिल्म ‘ह्याप्पी न्यु ईयर’, सञ्जयलिला भंसालीको ‘बाजीराव मस्तानी’जस्ता सुपरहिट फिल्म छाडेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
उनले भनेकी छिन् ‘निर्देशक सञ्जयलिला भंसालीले मलाई कयौँ पटक फिल्ममा काम गर्न फोन गर्नुभएको थियो,’ उनले भंसालीको शब्द दोहोर्याइन् ‘फिल्म गर, नत्र पछि पछुताउनेछौ ।’
सो समय आफूले विवाह गर्ने बारेमा सोचेको बताइरहँदा अहिले पुरा दिन सम्झेर आँफु साँच्चै पछुताएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले १९–२० वर्षको उमेरमा साउथ फिल्मका लागि बोलाएर ‘कम्प्रमाइज’ गर्न भनेको प्रङ्सग समेत बाहिर ल्याउँदै भनिन् मलाई फिल्म अभिनयका लागि कम्प्रामाइज गर्न दबाब दिँदै निर्मातासँग सुत्न भनिएपछि ठाडै अस्विकार गरे ।
उनले भावुक हुँदै भनिन् मलाई कसैसँग सुत्नभन्दा आफ्नो स्वाभिमान ठूलो लाग्यो र अहिले जहाँ छु म आफ्नै स्वाभिमानका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरेकी छिन् । अङ्किताले टिभी शो ‘पवित्र रिश्ता’का अलावा ‘झलक दिखलाजा’, ‘कमेडी सर्कस’, ‘मर्णिकर्णिका’मा काम गरेर चर्चा कमाएकी छिन् ।